काँग्रेसमा रोग पस्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर होः अर्जुननरसिंह केसी(भिडियो अन्तरवार्ता) - TV Annapurna
संस्थापन पक्ष महाविशेन अनिश्चित बनाएर नेविसंघलाई आफ्नो कब्जामा लिने उदेश्यले प्रेरित छ ।
नेपाली काँग्रेसको कार्यसमिति बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघको विधान पारित गरेको छ । विधानमा ३२ वर्षे उमेर हद लगायतका केही नयाँ कुरा समावेश भएका छन् । उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी लगायतका नेताले असहमति जनाएका छन् । संघले सर्वसहमतिबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको नेपाल विद्यार्थी संघको विधान २०२७ सातौं संशोधन २०७५’ लाई पन्छाएर विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् । तर विधान बहुमतका आधारमा पारित गरिएको सस्थापन पक्षकोे दाबी छ । पछिल्लो समय काँग्रेसमा देखिएको यो विवाद के हो ? र समाधान कसरी हुन्छ ? लगायत समसामयिक विषयमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विनोद देवकोटाले गरेको कुराकानीः
-कार्य समिति बैठकले पारित गरेको विधानमा तपाईहरुको आपत्ति किन ?
नेपाली काँग्रसको नियमावलीको ३७ धारामा स्पष्टसँग के लेखेको छ भने भातृ संस्थाहरुको विधानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट स्विकृत गर्नु पर्छ । नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वसममतिबाट विधान प्रस्तुत गर्यो । त्यो सर्वस्वीकृत विधान एकातिर पन्छ्याएर एउटा कुनाबाट अर्कै नयाँ विधान प्रस्तुत भयो । हामीले के भन्यौं भने विधान जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन गर्ने समय हुनु पर्छ आजै प्रस्तुत गरेर आजै छलफल गर्नु हुदैन ।
-अध्ययनको लागि त समय थियो नी ? पटक पटक कार्यसमिति बैठक सर्दै आएको थियो ?
होइन, कसरी अध्ययन गर्ने ? विधान दिएपछि त अध्ययन गर्ने हो । प्रस्वावित बिधान नै हामीलाई अध्ययान गर्न दिईएन
-यो बैठक भन्दा अघि विधानको मस्यौदा तपाईहरुले पाउनु भएको थिएन ?
हो, हामीले पाएका थिएनौं । एकै चोटी प्रस्तुत भो र त्यही दिन पारित गर्ने भनियो र पारित पनि गरियो । भन्दा खेरि विधि, विधान जस्तो महत्वपूर्ण कुरा निर्माण जस्तो कुरामा जुन किसिमको लोकतान्त्रिक छलफल र बहस हुनु पर्ने हो त्यो केही पनि नभईकन एकै दिन प्रस्तुत गर्ने उही दिन पारित गर्ने काम भयो । एक दिन पनि अध्ययनको लागि नदिने जुन प्रवत्ति हो । त्यो निरङकुश प्रवित्ति हो । अहिलेको यो पस्थितिमा सम्पूर्ण संरचनामा परिवर्तन गर्नु पर्ने र पार्टीलाई नयाँ दिशा दिनको निम्ति नेपाली काँग्रसकै विधानको छलफलको प्रारम्भमा छौं । मस्यौदा समितिले त्यसको अन्तिम रुप अथवा प्रारुप तयार गर्दै छ ,भोली विधान पनि एकै चोटी पढ्न नदिईकन लौ पारित भो भन्ने हो भने के गर्ने ? यसले के हुन्छ भने रोग पस्यो भन्दा पनि काल पस्यो भन्ने डर हो ।
-लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मान्नुहुन्छ नी ? बहुमतले गरेको निर्णय तपाईहरुले मान्ने कि नमान्ने ?
होइन, बहुमत भन्दा पनि बहुमतमा पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । तपाई लोकतन्त्रलाई के भनेर बुझ्नुस भने लोकतन्त्र भनेको प्रक्रियावद्द पद्दति हो । पद्दती मात्रै होइन , त्यो प्रक्रिया पनि हो र प्रवृत्ति पनि हो । त्यसलाई कमसेकम अध्ययन गर्ने मौका पनि नदिईकन जुन काम गरियो यो पूर्णत गलत छ । हामी कम्प्युटर त होइन नी ,तुरुन्तका तुरुन्तै पेस गरेर छलफल गर्ने र पारित गर्ने ।
-तपाईहरुको बैठक पनि छ घण्टा बढी समयसम्म बसेको छ । त्यो बैठकमा छलफल के भयो त ?
सबभन्दा पहिलो कुरा त के भने नेपाल विद्यार्थी संघले प्रस्तुत गरेको विधान त्यहा आउनु पर्यो । वहाँहरुले आफ्ने ढंगले मनोमानी रुपमा प्रस्तुत गर्न पाईदैन । रहेक भातृ संस्थाहरुलाई स्वायत्तता र व्यक्तित्व निर्माण र उनीहरुको स्वयं निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नको निम्ति पनि यसलाई केन्द्रले जहिले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।
-अहिले पारित भएको विधानको कुन बुँदा अथवा विषयमा तपाईहरुको असहमति हो ?
बुँदागत रुपबाट छलफल नै भएको छैन कसरी बुँदाभनौं । किन भने हामीले खोजेको नेविसंघले सर्वसम्मत रुपमा प्रस्तुत गरेको विधान ल्याउ भन्ने हो । यो विधान होइन अन्तबाट आएको हो । दफावार छलफल पनि भएको छैन । आ आफ्नो ढंगले कसैले पस्तुत गरे होलान । हाम्रो एउटै मात्रै दृष्टिकोण के थियो भने जुन नेविसंघले विधान पस्तुत गर्यो । हो त्यो विधानपछि छलफलमा अल्पमत होला बहुमत होला आआफ्नो बिचार प्रस्तुत होला । त्यो प्रक्रिया भिन्नै कुरा हो ।
-पार्टीलाई समयको चाप पनि त होला नी । जस्तो नेविसंघको महाधिवेशन गर्नु पर्ने लगायत ?
चाप-साप केही होइन । नियत हो । नियत चाहिं एउटै के हो भने नविसंघको अधिवेशन नगराउने नियतबाट र फेरी अधिवेसन हुन नदिने नियत हो । गराउन सकेनन अथवा गर्न दिएनन् भन्ने कुरा हो । नत्र नेविसंघले तयार गरेको विधान प्रस्तुत गर भने र त हामीले भन्दै आएका कुरा हो ।
-नेतृत्वले छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा विधान पारित गर्यो ?
छलफलको कुरै होइन । विधि र प्रक्रियाको कुरा हो ।
-६ घण्टासम्म बसेको बैठकमा के भयो त उसो भए ?
६ घण्टाको मिटिङमा त अर्कै विधान आयो । हामीले निरन्तर भन्यौं । यो विधानमा छलफल हुन सक्दैन । नेविसंघले केन्द्रमा पठाएको जुन विधान हो त्यो विधान प्रस्तुत हुनु पर्यो ।
-विधानमा के परिवर्तन भयो ?
हामीले त्यो विधानै पढेका छैनौं त के परिवर्तन भयो भन्ने ।
-प्रस्तावित विधान नै पढ्नु भएको छैन ?
प्रस्तावित विधान त्यो एक घण्टामै छलफल गर्दै त्यो विधानको ठेली पढ्न सकिन्छ ? तपाई कम्प्युटर हुनुहोला मत कम्प्युटर होइन । विधान जस्तो कुरा अहिले प्रस्तुत गरेर एकछिन छलफल गरेर आजैको आजै पारित गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ?
-कस्को इन्ट्रेसमा यस्तो विधान आयो र पारित भयो ?
कस्को भन्दा पनि अहिले नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन हुन नदिने तत्वहरु छन उनिहरुकै चाहानामा यस्तो भैरहेको छ ।
-त्यो अधिवेशन हुन नदिने तत्व कुन हो ? नेतृत्व हो अथवा अरु कोही ?
त्यो तपाईले नेविसंघकै नेताहरुलाई सोध्नुस् ।
-नेविसंघलाई त अहिले पार्टीले चलाईराख्या छ ?
त्यसैले त म भन्दै छु । पार्टीले त हरेक भातृ संगठन चलाउने हो ।
-चलाउने मात्रै होइन हस्तक्षेपसम्म पार्टीले गर्छ ?
त्यही हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भनेरै नेविसंघले पठाएकै विधान प्रस्तुत हुनु पर्छ भन्ने हो । अरु विषयवस्तुमा त हामी प्रवेशै गरेको नै छैनौं । त्यो उमेरको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसमा पनि छलफल हुनसक्थ्यो ।
-कुनै विषयवस्तुमा तपाईहरुको असहमति होइन त्यसो भए ?
सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रक्रियामा हो । उमेरहद लगायतका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा आएको भए त्यो विषयमा पनि छलफल हुनसक्थ्यो । पार्टीमा विविध विचार हुन्छन् । त्यो विभिधताबीचको एकता नै पार्टी हो । त्यस्तोमा बहुमत अल्पमत भएर निर्णय पनि हुनसक्थ्यो । बहुमतको निर्णलाई हामीले असहमति हुँदा हुँदै पनि स्वीकार गर्नु पर्थ्यो । तर विधि र प्रक्रिया तोडेपछि । बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्ने ? र त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने । केपी ओली सरकारको बहुुमत छ उसले जे गर्यो चुप लागे भै गो नी, किन विरोध गर्ने ? दुई तिहाइ बहुमत छ मनपरि गर्न दिए भैहाल्यो नी ।
-विधान पारित विधिसम्मत भएन । विधि तोडियो र तपाईहरुलाई पेलेर विधान पारित गरियो ?
हो विधसम्मत भएन । पेल्ने नपेल्ने भन्या त भोली थाहा होला ।
-केन्द्रीय कार्य समितिले विधान परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार छ की जे आयो त्यसैलाई स्वीकृत गर्ने हो ?
परिवर्तन गर्न सक्छ । तर नेविसंघले पठाउँदै नपठाएको विधान अर्कै कुनाबाट ल्याएर छलफल हुनसक्छ ?
-कस्ले गर्यो त्यस्तो कुनाबाट विधान प्रस्तुत ?
प्रस्तुत गर्नेहरुले गरे । संस्थापन पक्षले प्रस्तुत गरे ।
-यो विवादले त नेविसंघमा पनि विवाद देखिएला ? त्यहाँ पनि दुई पक्ष छ । यसले त नेविसंघको महाधिवेशन अन्यौल हुने भो हैन ?
अन्यौल गराउनै खोजेको हो नी उनीहरुले । गराउनै चाहदैनन् । महाधिवेशन भयो भने आफ्ना पक्ष पराजित हुन्छन भन्ने सुनिश्चत भईसकेपछि यसलाई गर्न दिएनन भन्दै म्याद थप्दै पर सार्दै गरेर परिक्रमावादीलाई नियुक्ति गरेर नेविसंघ आफ्नो कब्जामा लिने रणनीति हो यो । महिनौं दिन अघि पस्तुत भएको विधान किन केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत भएन ?
-यो पार्टी भित्रको विवादका कारण संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका पनि तपाईहरुको कमजोर भयो ?
संसदमा भुमिका कमजोर भएकै त छैन । तर जुन कमजोरी देखिएको छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ । एकातिर हामी पार्टीको आन्तरिक विधान लगायतका काम गर्दै छौ । अर्को तिर प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका पनि निभाई राखेका छौ ।
-पार्टी भित्र तपाईहरु पार्टीकै प्रतिपक्षमा बढी देखिनु भएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व पनि कम छ । त्यसमा शसक्त रुपमा भुमिका खेल्न सकिएन की भन्ने तपाई लाग्छ कि लाग्दैन ?
प्रतिपक्षको भुमिकामा हामी केही कमजोर देखिएका छौं । यसमा दुईटा कुरा छ । सरकारले जुन खालको हावामा महल बनाउने र सपनावादी सोचहरु जनतामा बाडेर भ्रम र झुटका पुलिन्दाहरुबाट जनतालाई आसा देखाएकोे थियो भ्रम आफै नाङगिदै जाओस भन्ने हो । दोस्रो भनेको नेपाली काँग्रस भनेको एमाले देखि लिएर माओवादीलाई पनि लोकतान्त्रिक बनाउने पार्टी हो । त्यसैले हामी सहजकर्ताको भुमिका र प्रतिक्षा गर्न जान्दछौं ।
-त्यसको मतलब तपाईहरु अहिले नै तातिने बेला भएको छैन ?
हामी आन्तरिक संगठन व्यवस्थित गर्दै यीनीहरुलाई अझै नाङगिन दिने प्रतिक्षमा छौं । उनीहरु आफै नाङ्गिदै छन् ।
वहाँसँगको पुरा कुराकानी हेर्न तलको भिडियामा क्लिक गर्नुहोस् !
भूकम्पपीडितले राहत नपाएको गुनासो